Maika handova: ahina ho ny zanany vavy no namono ny reniny | NewsMada
Maika handova: ahina ho ny zanany vavy no namono ny reniny
Niakatra fitsarana teny amin’ny lapan’ny Fitsarana ao Miarinarivo, ny alarobia teo ny raharaha famonoana an’i Mama Jeanne ( ilay ramatoabe novonoina tamin’ny fomba feno habibiana, tao Analavory ). Miisa 10 ireo olona voarohirohy tamin’ity raharaha vonoan’olona ity, saingy nisy ny nafahana noho ny fisalasalana…
Heloka niampangana azy ireo ny vonoan’olona sy firaisana tsikombakomba tamin’ny fanafenana razana. Naharitra roa andro ny fotoam-pitsarana ity raharaha ity vao nivoaka ny didim-pitsarana. Afaka noho ny fisalasalana ny zanaka vavin’ilay ramatoabe sy olona roa hafa. Tsy afa-bela kosa fa nahazo sazy mihatra 15 taona an-tranomaizina asa an-terivozona ny voampanga dimy hafa miampy fandoavana onitra 50 tapitrisa Ar. Ny ambiny kosa afaka noho ny fisalasalana. Manoloana ity didim-pitsarana ity, nilaza ho tsy afa-po amin’ny didy ny mpitory (ny fianakaviana ihany ireo mpitory) ka hampiakatra fitsarana ambony, raha ny fanazavan’izy ireo. Tsiahivina fa roa taona tsy hita faty (avrily 2014) i Mama Jeanne rehefa avy novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tao Ambohitratoandro Analavory. Nafenin’ireo nahavanon-doza ny fatiny ka tsy hita mihitsy raha tsy efa roa taona sy efa-bolana aty aoriana (oktobra 2016). Niditra an-tsehatra nanao fanadihadiana ity raharaha vonoan’olona ity ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) ka tratra tamin’izany ireo olona valo tompon’antoka tamin’ity raharaha ity. Isan’izany ny zanaka vavin’ilay ramatoabe sy ny vinantolahiny ary ny mpiambina sy ny mpamboly teo amin’ny taniny.
Maika handova ireo zanany…
Olona telo hafa kosa mbola karohina. Anton’ity vonoan’olona ity, manana tany eo ho eo amin’ny 30 ha ity ramatoabe ity ka maika handova izany ireo zanany sy ireo niray tsikombakomba taminy ka nitsiry tao an-tsain’izy ireo ny famonoana azy. Voalaza fa efa an-taony maro no namboly tamin’ireo tanin’ity ramatoabe ity ireto voampanga ireto ary mizara misasaka isan-taona ny vokatra azo. Nahafantatra tsara ireo voampanga, nandritra ny fifandaharana manoloana ny fitsarana fa nisy tokoa ny firaisana tsikombakomba teo amin’izy ireo tamin’ny fanafenana ny razana, nandritra izay roa taona mahery izay. Ny polisy siantifika sy ny polisin’ny BC no tonga nanao fanadihadiana ity vonoan’olona ity tany an-toerana tamin’ny fotoana nahatrarana ireo nahavanon-doza.
Nahoraka tao Analavory sy ny manodidina ity raharaha vonoan’olona ity, ny taona 2016.